संसारमा यस्तो झरना पनि छ, जहाँ सधै बत्ति बलिरहेको देखिन्छ जहाँको आगो कहिल्यै निभ्दैन ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/संसारमा यस्तो झरना पनि छ, जहाँ सधै बत्ति बलिरहेको देखिन्छ जहाँको आगो कहिल्यै निभ्दैन !
एजेन्सी ; विश्वमा धेरै अनौठा लाग्दा चिजहरु छन् । संसारमा रहेको यस्ता अनौठा चिजहरु पनि पत्ता लागेका छन्, जुन सुन्दा पत्यार नै लाग्दैन । अनौठो र सत्य हुने घटनाहरु जोकोहीले सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । यस्तै संसारमा यस्तो झरना पनि छ, जहाँ सधै बत्ति बलिरहेको देखिन्छ । संसार धेरै रहस्यमयी चिजहरु छन् ।
केही पत्ता लागेका छन् केही बाँकी । सुन्दा र देख्दा नै अचम्म लाग्ने घटनाले मानिसहरुलाई चकित तुल्याउँछ । यस्तै एउटा अचम्को झरना छ जहाँ आगो निरन्तर बलिरहन्छ । त्यो झरना न्युयोर्कको चेस्टनट रिज काउन्टी पार्कमा रहेको छ । उक्त झरना एउटा रहस्यमय ढुङ्गाको माथिबाट बगिरहेको छ ।
ढुङ्गा तल र झरनाको भित्र उक्त बत्ति देखिन्छ । लगातार झरना बगिरहे पनि त्यो बत्ति निभ्दैन । झरनाको तल कयौँ वर्षदेखि आगो बलिरहेको छ । न्युयोर्कको चेस्टनट रिज काउन्टी पार्कमा रहेको उक्त झरनालाई एटरनल फ्लेम पनि भनिन्छ । निरन्तर बगिरहने झरना तल आगो बलिरहेको देख्दा स्थानीयहरुले यसलाई दैवी चमत्कार पनि मान्ने गरेका छन् ।
यहाँ यो आगो हेर्न मानिसहरुको भीड लाग्ने गर्छ । यस बारे भारतको एउटा विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकहरुले अनुसन्धान गर्दा ढुङ्गाको भित्रिबाट मिथेन ग्यास निस्कने दावी गरेका छन् ।
the buddha khabar